Mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Soomaaliya oo bogaadiyay waxqabadka Taliska ciidanka Asluubta “SAWIRRO” – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Muqdisho (SONNA) - Mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Soomaaliya ayaa ka qeyab galay xaflad lagu soo bandhigayay waxqabadka 100-la malmood ee Taliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed.
Xafladda ayaa waxaa ka qeyb galay Xildhibaanno kirsan Labada Gole ee Dowladda, Wasiiro, Taliyeyaasha Maxkamadaha ciidamada qalabka sida, Maamulka Gobolka Banaadir, ururada bulshada rayidka iyo xubno kale oo munaasabadda lagu casuumay, iyadoo fanaaniinta Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed ay madasha ku soo bandhigeen sugaan ka turjumeysa waxqabadka taliyaha.
Munaasabadda ayaa waxaa lagu soo bandhigay waxqabadka taliyaha oo ay ka midtahay dib u dhis iyo qalabeyn lagu sameeyay xafiisayda saraakiisha, kaasi oo lagu hirgeliyay barnaamijka Isxilqaan ee lagu dhisayo xarumaha danta Guud ee dalka, horumarinta maxaabiista iyo daryeelkooda.
Xildhibaan Ibraahim Isxaaq Yarrow iyo Xildhibaan Cabdicasiis dhagaqool oo ka mid ah mudanayaasha Golaha Shacabka ayaa si wada jir u bogaadiyay waxqabadka muuqda ee Taliyaha ciidanka Asluubta, loona baahanyahay in mas’uul kasta uu kaalintiisa ka qaato dib u dhiska dalka.
Taliyaha ciidanka Asluubta Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa sheegay in howshan maanta la soo bandhigay ay gacan ku siiyeen saraakiisha ciidanka Asluubta oo farsamooyin badan yaqaano, ayna sii xoojin doonaan dadaallada lagu horumarinayo ciidanka Asluubta.
Wasiirka Garsoorka iyo Cadaaladda ee Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Xuseen Xaaji ayaa sheegay in xarumo kale oo ay leeyihiin ciidanka Asluubta lagu dhisi doono barnaamijka Isxilqaan, isagoo Taliyaha Asluubta ku booriyay in uu sii labo jibaaro dadaalka uu ugu jiro dib u dhiska xarumihii ay lahaayeen ciidanka Asluubta.